Ozi Ọma Mak Dere 11:1-33
Jizọs banyere na Jeruselem ka eze (1-11)
Jizọs bụrụ osisi fig ọnụ (12-14)
Jizọs mere ka ụlọ nsọ dị ọcha (15-18)
O ji osisi fig kpọnwụrụ akpọnwụ kụzie ihe (19-26)
A jụrụ Jizọs ebe ikike ya si (27-33)
11 Mgbe ha rutewere Jeruselem nso, ha rutere n’Ugwu Oliv bụ́ ebe obodo Betfeji na obodo Betani dị.+ O wee zipụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya,+ 2 sị ha: “Gaanụ n’obodo a unu na-ahụ. Ozugbo unu banyere n’ime ya, unu ga-ahụ nwa jakị e liwere eliwe, nke a na-enwebeghị onye nọkwasịrị na ya ruo ugbu a. Tọpụnụ ya, kpụtakwanụ ya ebe a. 3 Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu, ‘Gịnị mere unu ji na-atọpụ ya?’ sịnụ ya, ‘Onyenwe anyị chọrọ ka anyị kpụta ya, a ga-akpụghachikwa ya ebe a ozugbo.’” 4 Ha wee gawa ma hụ nwa jakị ahụ ka e liwere ya n’ọnụ ụzọ otu ụlọ dị n’akụkụ ụzọ. Ha wee tọpụ ya.+ 5 Ma ụfọdụ ndị guzo n’ebe ahụ sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-atọpụ nwa jakị ahụ?” 6 Ha gwara ha ihe Jizọs kwuru, ha ahapụ ha ka ha gawa. 7 Ha wee kpụtara Jizọs nwa jakị ahụ.+ Ha wụkwasịkwara uwe elu ha n’elu ya, ya anọrọ n’elu ya.+ 8 Ọtụtụ ndị gbasakwara uwe elu ha n’okporo ụzọ, ma ndị ọzọ si n’ọhịa gbute alaka osisi.+ 9 Ma ndị na-aga n’ihu ya ma ndị na-abịa n’azụ ya nọ na-eti mkpu, sị: “Biko, zọpụta ya!+ Onye ahụ nke na-abịa n’aha Jehova bụ onye a gọziri agọzi!+ 10 Alaeze na-abịa abịa nke nna anyị Devid+ bụ ihe a gọziri agọzi! Biko, zọpụta ya, gị onye nọ n’ebe kacha elu!” 11 O wee rute Jeruselem ma banye n’ụlọ nsọ lee ihe niile anya. Ma ebe ọ bụ na chi ejiwela, ya na ndịozi ya iri na abụọ gawara Betani.+ 12 N’echi ya, mgbe ha si Betani na-apụta, agụụ gụwara Jizọs.+ 13 Ọ nọ n’ebe dị anya hụ otu osisi fig nwejuru akwụkwọ ndụ. O wee gawa ile ma è nwere mkpụrụ ọ ga-ahụ na ya. Ma mgbe o ruru, e nweghị ihe ọ hụrụ ma e wezụga akwụkwọ ndụ n’ihi na oge ahụ abụghị oge mkpụrụ fig ji amị. 14 N’ihi ya, ọ sịrị osisi ahụ: “Ka onye ọ bụla ghara iri mkpụrụ gị ọzọ ruo mgbe ebighị ebi.”+ Ndị na-eso ụzọ ya nụkwara ihe o kwuru. 15 Ha wee bịarute Jeruselem. N’ebe ahụ, ọ banyere n’ụlọ nsọ ma malite ịchụpụ ndị na-ere ihe na ndị na-azụ ihe n’ụlọ nsọ. O kpuru tebụl ndị na-agbanwe ego nakwa oche ndị na-ere nduru ihu n’ala.+ 16 O kweghịkwa ka onye ọ bụla buru ihe ọ bụla si n’ụlọ nsọ gafere. 17 Ọ nọ na-ezi ihe, na-asị ha: “Ọ̀ bụ na e deghị, sị, ‘A ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mba niile’?+ Ma unu emeela ya ọgba ndị ohi.”+ 18 Ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ nụrụ ihe merenụ. Ha wee malite ịchọ otú ha ga-esi gbuo ya+ n’ihi na ha na-atụ ya egwu maka na otú o si ezi ihe juru ìgwè mmadụ niile ahụ anya.+ 19 Mgbe chi jiwere, ha si n’obodo ahụ pụọ. 20 Ma mgbe ha na-agafe n’isi ụtụtụ, ha hụrụ na osisi fig ahụ akpọnwụọla malite na mgbọrọgwụ ya.+ 21 Pita chetara ihe merenụ, ya asị Jizọs: “Onye Ozizi,* lee, osisi fig ahụ ị bụrụ ọnụ akpọnwụọla.”+ 22 Jizọs gwara ha, sị: “Nweenụ okwukwe na Chineke. 23 N’eziokwu, ana m asị unu na ọ bụrụ na onye ọ bụla asị ugwu a, ‘Si ebe a pụọ daba n’oké osimiri,’ ọ bụrụkwa na o nwee okwukwe na ihe o kwuru ga-eme ma ghara inwe obi abụọ, ọ ga-eme.+ 24 Ọ bụ ya mere m ji asị unu na ihe niile unu na-ekpe n’ekpere ma na-arịọ n’arịrịọ, nweenụ okwukwe na unu enwetala ha, unu ga-enwetakwa ha.+ 25 Mgbe unu guzo na-ekpe ekpere, gbagharanụ onye ọ bụla ihe ọ bụla o mere unu, ka Nna unu nọ n’eluigwe wee gbagharakwa unu mmehie unu.”+ 26 * —— 27 Ha bịara Jeruselem ọzọ. Ka ọ na-agagharị n’ụlọ nsọ, ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na ndị okenye bịara, 28 sị ya: “Ebee ka i si nweta ikike i ji eme ihe ndị a? Ma ọ bụ, ònye nyere gị ikike ime ihe ndị a?”+ 29 Jizọs sịrị ha: “M ga-ajụ unu otu ajụjụ. Unu zaa m ya, m ga-agwazi unu ebe ikike m ji na-eme ihe ndị a si. 30 Ikike Jọn ji mee ndị mmadụ baptizim+ ò si n’eluigwe ka ò si n’aka mmadụ? Zaanụ m ya.”+ 31 Ha wee malite ịgwa ibe ha, sị: “Ọ bụrụ na anyị asị, ‘O si n’eluigwe,’ ọ ga-asị, ‘Gịnịzi mere na unu ekwetaghị ihe o kwuru?’ 32 Ma anyị agaghị anwa anwa sị, ‘O si n’aka mmadụ.’” Ha na-atụ ìgwè mmadụ ahụ egwu n’ihi na ha niile kwetara n’eziokwu na Jọn bụ onye amụma.+ 33 N’ihi ya, ha zara Jizọs, sị: “Anyị amaghị.” Jizọs sịziri ha: “M gaghịkwa agwa unu ebe ikike m ji eme ihe ndị a si.”